သက်ဝေ: Passport သက်တမ်းတိုး နောက်ဆက်တွဲ
Pwint Myue August 5, 2010 at 12:58 PM
စနစ်သစ်မပြောင်းခင်လေးတင် တိုးထားတာ.. ၂နှစ်ကျော်တောင်ကျန်သေးတယ်.. လိုတဲ့အခါသုံးရအောင် ဗဟုသုတရလို ကျေးကျေးမမသက်ဝေ..
ပွဲစားအပ်လိုက်လေ 50ပဲပိုပေးရတယ် သံရုံးတစ်ခေါက်ပဲသွား. ၂ပတ်နေစာအုပ်ပွဲစားဆီယူလိုက်. ကိုယ်တိုင်သွားရင် ဒေါသတွေထွက်ရလို့ အသက်တိုနိုင်တယ်
T T Sweet August 5, 2010 at 1:40 PM
passport အသစ် သွားမလုပ်ရသေးဘူး။ လုပ်ရင် အလှူငွေလေးပါ တစ်ခါထဲ ဆွဲသွားရမှာ။
ပွဲစားပဲ အပ်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေပါသည်။
Thant August 5, 2010 at 2:17 PM
နောက် ၂နှစ်ကြာမှတိုးရမှာ.....အဲဒီအချိန်ကျရင် အခွန်တွေပေးချင်မှပေးရတော့မှာ...........လို့ တိတ်တိတ်လေး မျှော်လင့်လျှက်.........အက်...အက်....အက်..... :D
အင်ကြင်းသန့် August 5, 2010 at 2:17 PM
ဂျင်းလည်း passport သက်တမ်းတိုးဖို့ရှိနေတာ အနားနီးမှတိုးရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာ တော်ပြီ စောစောပဲ သွားတိုးလိုက်တော့မယ်။ အခုလိုမျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါမမ။း)
သက်ဝေ August 5, 2010 at 2:58 PM
အမည်မသိ အတွက် စာရေးသူမှ ပြန်စာ...
ပွဲစားနဲ့ဆောင်ရင် တစ်ခေါက်ပဲသွားရတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ပတ်အတွင်း မရပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ပြောမှ ရတာပါ။ ဒါလည်း ရ မရ မသေချာပါဘူး။ သံရုံးကတော့ လာထုတ်ရမယ့်ရက်ပေးတာ မှန်ပေမယ့် စာအုပ် ရှိ မရှိ အပေါ် မူတည်ပါတယ်။ စာအုပ်မရှိရင် အဲ့ဒီရက်ချိန်းထားပေမယ့် မရတတ်ပါဘူး။
အခုရေးထားတာတွေက ပွဲစားနဲ့ဆောင်ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်သွားတဲ့အခေါက်မှာ လုပ်ရမယ့် အရာတွေပါ။ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ပွဲစား လိုက်မပေးပါဘူး (ကိုယ့်ပုံပဲရိုက်ရမှာ ဖြစ်လို့ပါ)။ လက်ဗွေနှိပ်တဲ့အခါ ပွဲစား လိုက်မပေးပါဘူး (ကိုယ့်လက်ဗွေပဲနှိပ်ရမှာ ဖြစ်လို့ပါ) ။
ပွဲစားက လက်ဗွေနှိပ်မယ့်နေ့ကို ချိန်းပါလိမ့်မယ်။ ရုံးကခွင့်ယူရ ခက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေ သတိထားဖို့လိုပါသေးတယ်။ မသွားခင် ပွဲစားကို သေချာအောင် ထပ်မေးပါ။ အခွန်ဆောင်ပြီး စာရွက်ထွက်ပြီလား ဆိုတာကိုပါ။ ပွဲစားလက်ထဲကို အခွန်ဆောင်ပြီး စာရွက်ရောက်မှ စိတ်ချရပါတယ်။ မဟုတ်ရင် နောက်တခေါက်ထပ်သွားရပါလိမ့်မယ်။
Hi Ma Thet Wai,
I've just called Myanmar Embassy and asked about it as I am also waiting for my new passport ( I applied mine two months ago).The lady who answered my phone call said that...( in exact words ) "There's no such thing like photo-taking sessions at Embassy for the new e-passports".
I am not sure what she said is true or not.:D
Just sharing the info regarding this matter.
သက်ဝေ August 5, 2010 at 4:35 PM
ဒုတိယ အမည်မသိ အတွက် စာရေးသူမှ ပြန်စာ...
အပေါ်မှာ အသေအချာ ရေးထားပါတယ်... သံရုံးမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းကို ဒီတနင်္လာနေ့ကမှ စပါတယ်။ အခုမှ စတဲ့အလုပ်များဖြစ်လို့ နောက်ဆက်တွဲများလို့ ခေါင်းစဉ် ပေးထားခဲ့တာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လက ကလျှောက်ထားသူ ဖြစ်ပါက ဓါတ်ပုံပြန်ရိုက်ဖို့ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ ပွဲစားနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိရင်လည်း ပွဲစားတွေကို မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သံရုံးကို ဒီရက်ပိုင်းသွားသူများ မိတ်ဆွေထဲမှာ ရှိရင် မေးမြန်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အခုကတော့ ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်လာတာမို့ ဒီ့ထက်သေချာတာ မရှိတော့ပါဘူး။
Actually, I called embassy Today at about 4pm after reading your post.
And asking them whether we need to take photographs at Embassy for new E-passports and I also told them that I heard from my friends about this and it ( photo-taking ) just started this week.
I'm just asking her as general enquiry. ( I didn't mention my own case ).
And the lady ( she is foreigner )who answer my phone said exactly what I wrote in my previous comment. She means nothing like this( photo-taking ) is happening NOW at the embassy.
There isapossibility that she( the staff) is foreigner and she may not really know what is happening at the front desk.
Thanks for your reply, anyway. :)
Ko Paw August 5, 2010 at 7:01 PM
အို... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်... တို့ကတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ စေတနာတွေကို နားလည်ပြီးသား။
(ပြီးမှ လူမသိသူမသိ ဝှူးကနဲ လေပူကြီးတချက် အသာမှုတ်ထုတ်လိုက်ရသည်။)
သက်ဝေ August 5, 2010 at 8:38 PM
ကိုပေါ... ယုံတယ်.. ယုံတယ်... နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ စေတနာတွေကို နားလည်ပြီးသား ဆိုတာ ယုံပါတယ်...
(ကြောက်ကြောက်နဲ့ ခပ်မြန်မြန်လေး ပြန်ပြောလိုက်ရတယ်... အဟိ...)
အမေးနဲ့ အဖြေတွေကြားမှာ တခုခုတော့ မှားနေတယ် လို့ ထင်ပါတယ်... ကိုယ့် Profile မှာ Email ရှိပါတယ်... သေချာချင်ရင် Mail ပို့လိုက်ပါ... ဓါတ်ပုံပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါ့မယ်... ဒီ့ထက်သေချာတာ မရှိတော့လို့ပါ...း))
ကလူသစ် August 5, 2010 at 10:41 PM
အခွန်ရုံးနဲ့ပက်သက်လာရင် ဘာမဟုတ်တာလေးတွေတောင် နားလည်မှုလွဲနေကြပါလားလို့ ကော်မန့်ဖတ်ပြီး နားလည်သွားပါတယ် :)
khin oo may August 5, 2010 at 11:09 PM
kom: Ko Paw said... ပုံ... အခွန်ထမ်းပြည်သူတဦး။ (ကိုပေါက အခွန်ထမ်းတယ်ဆိုပါလား။
ညီမလေး August 5, 2010 at 11:54 PM
ဒီမှာတော့အရှင်းပဲ ပေးလိုက် ယန်း၈၅၀၀ စာတိုက်ကနေပို့လိုက် ၁ပတ်အတွင်း ပြန်ရောက်လာရော .. သက်တမ်းကတော့ လူပေါ်မူတည်သတဲ့ ပုံမှန်လူဆို ၁နှစ် ဂျိုပေါက်နေတဲ့ သူဆို ၃နှစ်တို့ ၅ နှစ်တို့ အမျိုးတူတွေဆိုတော့ စာနာတယ်ပေါ့း)
Steve Evergreen August 6, 2010 at 1:25 AM
ဗြိတိန်က မြန်မာ သံရုံး ကတော့ ဓာတ်ပုံကို print out လဲ ထုတ်လာခိုင်းတယ် Digital copy ကိုလဲ CD ထဲမှာထည့်လာခိုင်းပါတယ်။ သိတ်မခက်ပါ
အမရေ... ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပွဲစားနဲ့အပ်ခဲ့တာပါ... အမပြောသလို လက်ဗွေကိုယ်တိုင်နှိပ်မှ ရတယ်ဆိုတာမှန်ပေမယ့် ကျွန်မကိုယ်တိုင်နှိပ်ခဲ့တဲ့အချိန်က ည 7:30 မှပါ.. ပွဲစားတွေက အဲဒီအချိန်ကျမှ သူအပ်ထားတဲ့သူတွေကို ခေါ်ပြီး လုပ်ပေးတာပါ.. အလုပ်လည်းမပြတ်ခဲ့ပါဘူး.. ကျွန်မလုပ်တုန်းက Photo ကို ရိုက်ပြီးမှပေးရလို့ photo ကိုတော့မသိပါ..
သက်ဝေ August 6, 2010 at 9:54 AM
အပေါ်က မြန်မာလိုရေးသွားသော အမည်မသိသို့ စာရေးသူမှ ပြန်စာ...
ရေးထားတဲ့စာကို သေသေချာချာ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ပေးချင်တဲ့ Message နဲ့ သဘောပေါက်တာနဲ့ လွဲနေတယ်…။ ယခင်နဲ့ယခု ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မတူတတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန်လည်း မတူတတ်ပါဘူး။ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေလည်း တနေ့ တမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်… အရင်က အဲ့ဒီအချိန်ထိ သံရုံးဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခု နောက်ပိုင်း ငါးနာရီခွဲ ခြောက်နာရီမှာ သံရုံးပိတ်ရပါတယ်။ အရင်က ပေးတဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့တင် ပြီးပါတယ်။ အခု မပြီးတော့ပါဘူး။
ဒါ့ထက်ဆိုရင် အရင်က စာအုပ်မလုံလောက်ရင် စာအုပ်ပေါ်မှာ သက်တမ်းတိုးတုံး ထုပေးမယ် ပြောခဲ့တယ်။ အခု ထုမပေးနိုင်တော့ဘူး။ စာအုပ်အသစ်ကိုပဲ ထုတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်မလုံလောက်ခြင်းနဲ့ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ကဒ်သက်တမ်းတိုးဖို့ ကိစ္စကို သုံးသပ် ဆင်ခြင်ပြီး မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တာတွေ မဖြစ်ကြစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးထားတဲ့ ပိုစ့် ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်တုန်းက မလုပ်ရလို့ အခုလဲ မလုပ်ဖူးလို့ ပြောလို့မရပါ။ အခု ပြောထားသမျှဟာ အရင်က လုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ မလုံလောက်လို့ ထပ်ပြောပေးတာပါ။ အရင်အတိုင်းပဲဆိုရင် မနေနေနိုင်ရဲ့ ပို့စ်နဲ့တင် ပြည့်စုံနေပါပြီ။
၁) အခွန်ဆောင်ဖို့ ကို နောက်တပတ်ထပ်ချိန်းပါတယ်
၂) အခွန်ဆောင်ပြီး မှ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခွင့် ရှိပါတယ်
၃) လက်ပွေနှိပ် က ဓါတ်ပုံ နဲ့ တခါထဲ လုပ်လို့ ၇ပါတယ်
၄) နောက်ချိန်းတဲ့ရက်ကို ထပ်သွားရပါတယ်
ရ ချင်ရ မရချင် နောက်တခေါက် ထပ်သွား
မကျေနပ်ရင် လာမတိုးနဲ့ တဲ့
blueskyforest August 6, 2010 at 10:59 AM
နောက်အစိုးရသစ်တက်လာရင် သက်ဝေကို စင်္ကာပူနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင် သွင်းမယ်ကွာ။း)
သိင်္ဂီနွယ် August 6, 2010 at 1:13 PM
ဖတ်၊ မှတ်၊ မန့်တာတွေကြည့်.. ခေါင်းနောက် ပြန်သွားပါတယ် သက်ဝေရေ...
အဲ..သူတို့ တင်ထားပေးရမယ့် အချက်အလက်တွေ သက်ဝေ တင်ထားပေးလို့ ကျေးဇူး.. :)
စာတွေလာဖတ်ပြီး မန့်မရလို့ လှည့်ပြန်ရတာ အကြိမ်ကြိမ်.. :(